Hair Beauty Lounge - KER Rendezvous
Refresh Your Personality
Diamond Lounge : Hair & Beauty
We will make an event of Diamond Lounge Grand Opening at First floor of KER Rendezvous. We will invite all of you to participate in the event which will display the real collaboration of beauty and fashion show by International model and German hair designers. We will advise and help you there to upgrade and create real styles of hair that will suit you and your personality. Refresh your personalities and upgrade your confidence.
ရန်ကုန်မြို့မှာ Luxury Hair Lounge တခုကို မကြာခင်ထွက်ပေါ်လာတော့မှာကို သတင်းကောင်းလေးပေးချင်တယ် ၊ တကယ်ခမ်းနားပြီး အမိုက်စား ဆိုတဲ့အရာတွေ တနေရာထဲစုစည်းထားလို့ Luxury ကိုမှကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ လူတွေအတွက်အကြိုက်တွေစေမဲ့ နေရာလေးတခုပါ 💎
💎 Diamond Lounge (Hair & Beauty) မှာ ပိုထူးခြားတာက Luxury ထဲမှာ မှ Vip Luxury Room ကိုထားရှိပေးထားပါတယ် ဆံပင်ညပ်ဆရာကိုလည်း ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဆံပင်ပညာရှင် အပြင် မြန်မာနိုင်ငံမှပညာရှင်များ နှင့် ညပ်နိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားတယ်၊ နောက်ပြီး VIP Luxury Room ထဲ မှာဘဲ ခေါင်းကိုလည်းတခါတည်း လျှော်လို့ရအောင် သီးသန့်အခန်းနဲ့ ပါရှိတဲ့အတွက် အေးဆေးအနားယူချင်တဲ့လူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးနေရာလေးတခုဖြစ်လာတော့မဲ့အကြောင်းလေးကို သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ် 💎
Opening Hours – 10:00 AM to 10:00 PM
KER 🐉 RENDEZVOUS🐉, ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။ (ချော်တွင်းကုန်းမီးပွိုင့်နှင့် ကမ္ဘာအေး ဂမုန်းပွင့်ကြား၊ သတ္ထုဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်အရှေ့)